> Resource> iTunes> Top 3 Free iTunes Lyrics Wijetị maka Mac
Ị ga-mkpa nwere lyrics maka gị niile music mere na i nwere ike iji ndị ọzọ wijetị na-egosipụta lyrics. Ngwá ọrụ a, Otú ọ dị, ike ịchọ na ibudata lyrics niile gị na songs-akpaghị aka. Nye ya a na-agbalị na ị ga-enweta ihe ịtụnanya. Mụtakwuo >>
Ọtụtụ iTunes lyric wijetị na-adịghị aba dị ihe ọ bụla ọzọ ruru ka nwebisiinka nke ma ọ bụ ịzụlite otu na-enye elu oru ngo, dị ka Harmonic wijetị na-awụ ọsọ n'ugwu Lyric Wijetị maka Mac. Dabara nke ọma, anyị ule atọ ndị a lyrics wijetị ihe ọhụrụ iTunes (10.5) na Mac 10.6.8 (Snow agụ owuru). Ha niile na-arụ ọrụ. Họrọ ọkacha mmasị gị iTunes lyrics wijetị na-abụ abụ na iTunes.
Get in-a me
Nke a iTunes lyric wijetị na-arụ ọrụ na Mac ígwè ọrụ. The interface bụ dị mfe dị ka ekwe omume - nanị ole na ole buttons gụnyere. Na Get in-a me, ị nwere ike mfe tinye lyrics ka ugbu a na-akpọ song egwu ma ọ bụ a nhọrọ nke tracks. Ele lyrics, nnọọ pịa anya bọtịnụ. Na Ọrụ nkpado bọtịnụ na, ị nwere ike na-akpaghị aka na-lyrics maka songs mgbe ị na-egwu ha. Nke a bụ maa ihe iTunes lyric wijetị ị na-ekwesịghị ileghara, ọ bụ ezie na ọ ga-mgbe ụfọdụ okuku.
Nke a bụ a Mac Dashboard wijetị na-egosipụta lyrics maka ugbu a na-akpọ song. Basic achịkwa iTunes songs na-nyere mere na ị pụrụ abụku ọzọ akụ mfe. Album cover artwork nwere ike Switched ma ọ bụ gbanyụọ n'elu nri bọtịnụ. Pịa "m" button n'ihi na ihe mmasị dị ka font, ịke, lyric nchekwa data, wdg Site ndabara, MetroLyrics na Utamap nchekwa data-eji tumadi maka English na Japanese lyrics. Get ya ebe a.
Atụmatụ: Olee otú ka Wepụ Dashboard Wijetị
1. Ke Dashboard (nke ahu na F4 imeghe), ịgbatị ngwaọrụ Bar site na ịpị gbakwunyere ịrịba ama bọtịnụ.
2. Pịa Jikwaa Wijetị bọtịnụ ma ọ bụ pịa Wijetị wijetị button na-egosi ndepụta niile gị arụnyere wijetị.
3. Pịa uhie ewepụ button wepụ wụnye dashboard wijetị ahịhịa.
Nke a wijetị si Yahoo bụghị nanị a lyrics wijetị. Ọ na-achọ Yahoo Wijetị (a obere ngwa awụnyere na ndị ọzọ wijetị) arụnyere na gị na Mac ma ọ bụ Windows. E wezụga na-egosipụta lyric maka ugbu a na-akpọ track, ọ na-enye gị ohere ime ka Karaoke-ịke lyrics na-enyocha Amazon.com maka album cover artwork. Ọ bụ ike kacha ike lyrics wijetị n'etiti atọ ndị a iTunes wijetị.